रविको लागि बलिदान दिने युवा भेटियो, छातीमै खोपे यति महँगो ट्याटू ! रविलाई फ*साए म*र्न तयार (हेर्नुस भिडियो) – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /भिडियो/रविको लागि बलिदान दिने युवा भेटियो, छातीमै खोपे यति महँगो ट्याटू ! रविलाई फ*साए म*र्न तयार (हेर्नुस भिडियो)
रविको लागि बलिदान दिने युवा भेटियो, छातीमै खोपे यति महँगो ट्याटू ! रविलाई फ*साए म*र्न तयार (हेर्नुस भिडियो)
१० दिन हिरासतमा परि रिहाइ भएका पत्रकार रबि लामिछाने राजधानी फर्किएका छन।केहि क्षेन अगाडी त्रिभुवन बिमान स्थलमा पत्रकार संगको भेट संगै रविको समर्थकको पनि भरपुर साथ् देखिएको थियो।रबि संगै उनकी पत्नी पनि राजधानी फर्किएकि छिन भने युवराज कडेल पनि राजधानी आइसकेका छन।
काठमाडौँ फर्के पछी रबिका समर्थकहरुले खुसियाली समेत मनाएका छन् । यसै बीच थानकोट का एक युवकले रविको ट्याटु नै खोपेका छन् । यदि रबि दोषी भएर जेल गए पनि आफुले उक्त ट्याटु नमेटने बताउछन । बाकी कुरा भिडियोमा हेर्नुहोला :
मनिषाले दिइन् भारतियलाई कडा जवाफ : रविले गरे समर्थन